I-7 eyoMdanga ye-Aso Oke yeSitayile ye-2019 Yoruba uMtshakazi-Wakuba | Uhlobo Rave
Iingcamango ezi-5 zoSuku lweValentine yoMntu onayo yonke into
YKuya kufuneka ujonge uhlaziyo lwakho lwe-WhatsApp okanye undwendwele i-Instagram ukubona ukuba abantu bayabandakanyeka kwiiyure zonke. Abafazi babonisa amakhonkco abo okususa ucocekile kubahlobo nakwintsapho kumajelo asekuhlaleni kwaye sonwabile njengabo bonke ababandakanyekayo ngenxa yokuba… .Thanda UTHANDO!
Ukuncedisa kuhambo olutsha lomtshato, ngamanye amaxesha sibaguqula indlela yakudala kunye neyona nto ifanelekileyo yokuvuselela abatshakazi bethu, okusizisa kwingqwalasela yethu namhlanje: Aso Oke-mama Iro kunye noBba isinxibo.
Ezi ntsuku, ilaphu leAso Oke lelakho konke kungakhathaleki nokuba usuka empuma okanye entshonalanga; Nangona kunjalo, kwimitshato, ihlala isisixhobo esikhethiweyo soMtshakazi waseYoruba. Njengenxalenye yesiko elimiyo, umakoti wase-Yoruba unxiba ilaphu elilukiweyo elidla ngokuthunga kwi-Iro nase Buba, ligcwele igama Kadhi Isentloko Le ndlela yemveli yesiYoruba ayitshintshile kubudala, kodwa yintoni isitayela sayo.
Ngasekupheleni kuka-2018, sabamba indlela ebonisa ukuba i-Iro kunye neBuba babefumana uguquko olukhulu; Uyilo lwalusiya luqala ukuyila kwaye amalaphu, ekhetheke ngakumbi kwaye enabile, ngokuhambelana nokukhetha kwakho.
Ukuba ungumakoti wase-Yoruba okanye-uyazi enye, le ncwadi ujonge kuyo iza kukunceda ufumane namaxesha njengoko ulungiselela usuku lwakho olukhethekileyo.
Nazi i-Aso Oke zelixesha - zenziwa ngohlobo lwe-Iro x eBuba…
isitayile soo okho abatshakazi izitayela ze-aso oke zika-2019 Aso oke. Ifo oke yefashoni Isitayile sokuqhawula umtshato aso oke Okufumaneka Iro kunye noBba Uhlobo lwamva nje lwe-aso oke Isitayile sekamva njengesiqhelo Ifoto yase scgeorge I-aso oke yendabuko
UJessica Agorye January 22, 2019
Ukujonga emva kweyona miba inomdla kwiAfroPunk Festival Joburg 2018